आकस्मिक घटना हुनु अघि तपाईसँग उपयुक्त बीमा कभर छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
ब्रिटिश बीमाकर्ताहरूको संघ (ABI) सँग तपाईंको व्यवसायको लागि सही बीमा छनौट गर्ने बारे उपयोगी जानकारी छ।
तपाईंको व्यवसायलाई सम्भावित रूपमा बाधा पुर्‍याउन सक्ने खतराहरू र खतराहरू के हुन्?
संगठनात्मक जोखिमहरू समावेश छन्:
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको हानि (ICT)
परिसरको हानि (आगो, डाटा हानि, शक्ति हानि)
डाटा हानि (आईसीटी आउटेज वा साइबर सुरक्षा घटना)
बाढी - बाढीको तयारीको बारेमा थप जानकारीको लागि हाम्रो बाढी पृष्ठहरूमा जानुहोस्
कर्मचारीको हानि (फ्लू महामारी, गम्भीर मौसम, ट्राफिक घटनाहरू)
बाह्य निर्भरताको हानि (इन्धन, बिजुली, दूरसञ्चार, पानी, साझेदार, आपूर्तिकर्ता)
त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्ने सम्भावना के छ र तपाईंको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
यी पाँच चरणहरूसँग तपाईंको व्यापार निरन्तरता योजना सिर्जना गर्नुहोस्
व्यवसाय निरन्तरता योजना विकास गर्ने पहिलो चरण भनेको तपाईको व्यवसायले के गर्छ र तपाईलाई यो गर्नको लागि कुन स्रोतहरू चाहिन्छ भन्नेमा साँच्चै राम्रो देखिन्छ।
यो प्रक्रियाको भाग हो जहाँ व्यवसाय प्रभाव मूल्याङ्कन भित्र पहिचान गरिएका गतिविधिहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न उपयुक्त समाधानहरू पहिचान गरिन्छ। यो फरक पूर्व-परिभाषित र सहमत स्तरमा हुन सक्छ।
व्यापार निरन्तरता योजनाहरूको सफलताको कुञ्जी भनेको तिनीहरू परीक्षण र उद्देश्यका लागि फिट छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। यो एक पहिचान परिदृश्य विरुद्ध योजनाहरु परीक्षण गरेर हासिल गर्न सकिन्छ।
BC लाइफसायकलको अन्तिम चरण भनेको व्यवसायको निरन्तरताको प्रक्रियालाई तपाइँको सङ्गठनमा इम्बेड गरिएको सुनिश्चित गर्नु हो। के गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने र योजनामा आफ्नो भाग कसरी लिने भन्ने सबै कर्मचारीहरूलाई थाहा छ।
व्यापार प्रभाव विश्लेषण, BIA को रूपमा चिनिन्छ, व्यापार निरन्तरता योजनाको एक घटक हो जसले महत्वपूर्ण र गैर-महत्वपूर्ण प्रणाली र प्रक्रियाहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
व्यापार प्रभाव विश्लेषण टेम्प्लेट
हाम्रो उपयोगी प्रयोग गर्नुहोस् टेम्प्लेट (एक्सेल कागजात ढाँचा) र एक व्यापार प्रभाव विश्लेषण र एक महत्वपूर्ण आवश्यकता विश्लेषण सिर्जना गर्न तल गाइड
यो टेम्प्लेटले तपाईंको संगठनलाई यसको महत्वपूर्ण कार्यहरू (र तिनीहरूको निर्भरताहरू) पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ जुन अवरोधको अवधिमा योजनाबद्ध हुनुपर्छ।
टेम्प्लेटलाई १० क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको छ।
तलको तालिकाले क्षेत्रहरूको रूपरेखा र तपाइँलाई प्रत्येक खण्डमा समावेश गर्न आवश्यक छ:
तपाईको विभाग/संगठनले गरेको प्रत्येक गतिविधिको सारांश। मिनेटको विवरणमा नजाने प्रयास गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि 'कल ह्यान्डलिङ'लाई गतिविधिको रूपमा रेकर्ड गर्नुहोस्, 'कल जवाफ दिनुहोस्', 'कल डाइभर्ट गर्नुहोस्', 'एक्शन कलहरू', 'लग कलहरू', आदि।
'अवरोधको अधिकतम सहनीय अवधि': यो अवधि हो जस पछि तपाईले विश्लेषण गरिरहनुभएको गतिविधि प्रदर्शन गर्न असफलताबाट अस्वीकार्य परिणामहरू हुनेछन्। यसमा समावेश हुन सक्छ: सेवाको मिशन महत्वपूर्ण गतिविधिहरू कायम राख्न असक्षमता, अस्वीकार्य प्रतिष्ठा परिणामहरू, विधायी गैर-अनुपालन, आदि।
गतिविधि असफल भएमा सेवामा प्रभाव
यो गतिविधि असफल भएमा सेवामा परेको प्रभावको संक्षिप्त विवरण, जस्तै प्रतिष्ठाको क्षति, वैधानिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न असफल हुनु, आर्थिक हानि आदि।
यो गतिविधि गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको न्यूनतम संख्या, साथै भूमिका प्रदर्शन गर्न आवश्यक सीपहरू।
उपकरण र सवारी साधन
यो भूमिका पूरा गर्न आवश्यक उपकरणहरू, जस्तै क्यामेराहरू। तपाईले आवश्यक पर्ने कुनै पनि सवारी साधनको विवरण पनि समावेश गर्नुपर्छ, जस्तै कार, विशेषज्ञ सवारी साधन, आदि।
यो गतिविधि गर्न आवश्यक सबै सफ्टवेयर र हार्डवेयर को विवरण।
यस गतिविधिको लागि आवश्यक पर्ने सबै भवनहरू, कोठाहरू, फर्निचर र कल्याणकारी सुविधाहरूको विवरणहरू, जस्तै निजी अन्तर्वार्ता कोठा, जेनेरिक अफिस स्पेस, इत्यादि।
सबै खण्डहरूको विवरण जसमा यस गतिविधिको निर्भरता छ, उदाहरणका लागि यदि गतिविधि वित्तमा निर्भर छ, आदि।
सबै उपयोगिताहरू, सेवाहरू, ठेकेदारहरू र अन्य आपूर्तिकर्ताहरूको विवरणहरू, जस्तै ग्यास, इन्टरनेट, कल आउट सम्झौताहरू, आदि।
यस गतिविधिसँग सम्बन्धित चासोको कुनै पनि अन्य बिन्दुहरू, जस्तै महिना/वर्षको मुख्य समयहरू, आसन्न परिवर्तनहरू, वा अनुमानित मुद्दाहरू।
आफ्नो योजना डिजाइन गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले आफ्नो व्यवसाय र यसका कमजोरीहरू बुझिसकेपछि तपाईंले आफूलाई बचाउने केही तरिकाहरू हेर्न आवश्यक छ। तपाईंको योजनामा निम्न समावेश हुन सक्छ:
कर्मचारी, ग्राहकहरू र आपूर्तिकर्ताहरूको लागि घण्टा सम्पर्क विवरणहरू बाहिर
सञ्चार योजना तयार गर्नुहोस् - तपाईंले आपतकालीन अवस्थामा कसलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ र के भन्नुहुनेछ
कागजात प्रक्रियाहरू - 'कसरी गर्ने गाइडहरू' तयार गर्नुहोस् ताकि कर्मचारीहरूले एकअर्काका गतिविधिहरू पूरा गर्न चरणहरू पछ्याउन सक्छन्।
सहमत स्थानान्तरण विकल्पहरू - यदि तपाइँ आफ्नो परिसरमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ
आईसीटी / क्लाउड-आधारित टेक्नोलोजीमा रिमोट पहुँच - तपाईं विभिन्न स्थानहरूबाट आफ्नो कम्प्युटर नेटवर्क पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ
अफसाइट डाटा भण्डारण सुरक्षित गर्नुहोस् - तपाईंको कम्प्युटर प्रणालीहरू ब्याकअप गर्नुहोस् र अर्को स्थानमा फायरप्रूफ क्याबिनेटहरूमा ब्याकअप टेपहरू भण्डार गर्नुहोस्।
वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू - यदि आपूर्तिकर्ताले व्यापार रोक्छ भने तपाईले आफ्नो उपकरण कहाँ पाउनुहुनेछ
तपाईंको व्यापार निरन्तरता योजना (शब्द कागजात ढाँचा) मा मद्दत गर्न यो चेकलिस्ट डाउनलोड गर्नुहोस्: व्यापार निरन्तरता चेकलिस्ट तयार हुनुहोस्
आफ्नो योजना लागू गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले काम गरिसकेपछि तपाईंले के गर्न आवश्यक छ अर्को चरण यो गर्नु हो। तपाईले सस्तो र व्यावहारिक के हो भनेर काम गर्न आवश्यक छ। ध्यानमा राख्नुहोस् कि केहि चीजहरू कार्यान्वयन गर्न धेरै सीधा हुनेछन्, जबकि अरूलाई ठाउँमा राख्न धेरै समय लाग्न सक्छ।
आफ्नो कर्मचारीलाई तालिम दिनुहोस्
के तपाईका सबै कर्मचारीहरूलाई व्यापार निरन्तरता योजना के हो थाहा छ? के उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले व्यापार निरन्तरता घटनामा के कार्यहरू लिनेछन्?
तपाईंको योजनाहरू प्रमाणित गर्नुहोस् र तपाईंको कर्मचारीहरूलाई तालिम दिनुहोस्
यो सबै राम्रो छ र योजनाहरू राम्रो छ, तर तपाईंलाई कसरी थाहा छ कि तिनीहरू काम गर्छन्? यो गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका तिनीहरूलाई परीक्षण गर्न हो। यसले तपाइँका कर्मचारीहरूले योजनाहरू भित्र उनीहरूको भूमिका बुझ्दछन् भनेर सुनिश्चित गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।